अर्घाखाँचीको क्वारेन्टिनमा आरडीटी पोजेटिभ देखिएका एक पुरुषले गरे आत्मह-त्या
रेखा थापाले पनि राप्रपा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने
आगलागी पीडितलाई सहयोग
एकै परिवारका तीनजना मृतावस्थामा
अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली चल्यो
एमाले एकजुट भएको सन्देश गयो : उपाध्यक्ष नेम्वाङ
यु-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा प्रदेश २ लाई हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा
सेवाग्राहीबाट घूस लिँदै गर्दा कार्यालय प्रमुख र अमिन पक्राउ
बौदीकालीको सुन्तलाले पाएन बजार
१. कर्णालीको अभियान चलाउने होइन सचीव पाउनु पर्छ : केन्दिय सदस्य आचार्य
२. जाजरकोट बस दुर्घटनामा मृत्युु हुने पाँच जनाकै सनाखत
३. निर्माणकै क्रममा भाँचियो पुल
४. देवरको हत्यामा भाउजूलाई पक्राउ
५. साउदी अरेरिबायाद्धारा यमनमा बमबारी
६. सेवाग्राहीबाट घूस लिँदै गर्दा कार्यालय प्रमुख र अमिन पक्राउ
७. बहुविवाह मुद्दामा फरार महिला पक्राउ
८. एमाले महाधिवेशनको मतगणना एक बजेपछि , गणना सुरु भएको २ घण्टामा परिणाम
९. कांग्रेस महाधिवेशनको विभिन्न जिल्लाको प्राप्त मतपरिणाम
१०. कालिकोटमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
३ असार २०७७, बुधबार १०:५२ प्रकाशित
बुटवल,३ असार । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएका एक पुरुषले आत्मह-त्या गरेका छन् । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–५ जुकेनास्थित हरि माविको क्वारेन्टिनमा बसेका ४४ वर्षीय देवबहादुर विकले गएराति आत्मह-त्या गरेका हुन् । विद्यालयको एउटा कोठामा सँगै बसेका दुईजना साथीहरु नि’दाएपछि उनले रातिमा विद्यालय नजिकैको एक रूखमा झु-ण्डिएर आत्मह-त्या गरेको वडा अध्यक्ष कमल पौडेलले बताए ।
उनको २४ गते गरिएको आरडीटी परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । पीसीआर परीक्षणका लागि २५ गते उनको स्वाबको नमुना लिएर प्रादेशिक प्रयोगशाला भैरहवा पठाइएको थियो । उनी भारतको पञ्जाबबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
यसैबीच अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिन ज्यादै ढिलाइ गर्दा यस्ता दुःखद् घ टनाहरु हुन थालेको प्रतिक्रिया दिए । ‘समयमा रिपोर्ट नआउँदा मान्छेहरुमा नै’राश्यता र न’कारात्मक कुराहरु आउने स’मस्या भयो,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।फोटो:फाइल
साउदी अरेरिबायाद्धारा यमनमा बमबारी
सुर्खेत-दैलेख सडक महिनाका लागि बन्द हुने
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन बरामद
१. रेखा थापाले पनि राप्रपा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने
२. आगलागी पीडितलाई सहयोग
३. एकै परिवारका तीनजना मृतावस्थामा
४. अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली चल्यो
५. एमाले एकजुट भएको सन्देश गयो : उपाध्यक्ष नेम्वाङ
४. तास खेलिरहेका ३५ जना पक्राउ
५. बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु